आज रातिदेखि शुरु हुँदै युरोकप - Kantipath.com
आज रातिदेखि शुरु हुँदै युरोकप
युरोपियन फुटबल महासंघ (युइएफए) को आयोजनामा हुन लागेको युरोकपको १६औं संस्करणको महादेशीय फुटबल प्रतियोगिता शुक्रबार रातिबाट शुरु हुँदैछ। प्रतियोगिता आगामी जुन ११ देखि जुलाई ११ सम्म हुँदैछ। प्रतियोगिता ११ देशका ११ शहरमा आयोजना हुनेछ। शुरुमा सन् २०२० को जुन १२ देखि जुलाई १२ सम्म प्रतियोगिता आयोजना हुने तय भएपनि कोरोना महामारीको कारण एक वर्ष पछाडि धकेलिएको थियो। एक वर्ष सारेर सन् २०२१ मा प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागिए पनि नाम युइएफए युरो २०२० नै राखिएको छ। त्यसैले पहिलो पटक युरोकप विजोर वर्षमा हुन लागेको हो।
प्रत्येक देशमा समूह चरणका तीन खेल र अन्तिम १६ वा क्वार्टरफाइनलको एक खेल हुनेछन्। ६ समूहका शीर्ष दुई टिम गरी १२ टिम अन्तिम १६ मा पुग्नेछन्। समूहमा तेस्रो हुनेमध्ये उत्कृष्ट ४ टिम पनि अन्तिम १६ मा पुग्नेछन्।समूह चरणका खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ६:४५ बजे, राति ९:४५ बजे र मध्यरात १२:४५ बजे हुनेछन्। अन्तिम १६ र क्वार्टरफाइनल खेल राति ९:४५ बजे र मध्यरात १२:४५ बजे हुनेछन्। सेमिफाइनल र फाइनल खेल मध्यरात १२:४५ बजे हुनेछ। युरोकप २०२० मा पहिलोपटक भिडियो सहायक रेफ्री (भिएआर) प्रयोग हुँदैछ।
प्रतियोगिताको विजेताले १० मिलियन युरो प्राप्त गर्नेछ। उपविजेतालाई ७ मिलियन युरो तथा सेमिफाइनल पुग्ने टिमलाई ५ मिलियन यूरो दिइनेछ। फाइनल पुग्ने टिमले सेमिफाइनलदेखि समूह चरणको पनि नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्। क्वार्टरफाइनल पुग्ने टिमले ३.२६ मिलियन युरो प्राप्त गर्दा अन्तिम १६ मा पुग्ने टिमलाई २ मिलियन युरो प्रदान गरिनेछ। समूह चरणमा जित हात पार्ने टिमले १.५ मिलियन युरो प्राप्त गर्नेछ, बराबरी भएमा दुवै टिमलाई ७ लाख ५० हजार युरो प्रदान गरिनेछ। यस्तै युरो कपमा छनोट हुने टिमले ९.२५ मिलियन युरो प्राप्त गर्नेछ। युरो २०२० सहभागी टिमले कम्तिमा ९.२५ र बढीमा विजेताले ३४ मिलियन युरो नगद पुरस्कार प्राप्त गर्न सक्नेछ।
Previous Previous post: पाँचथर अस्पताल १०० शैय्यामा स्तरोन्नति हुने
Next Next post: पुर्व मन्त्री डा. लामाद्धारा निर्माण भई रहेका गुम्बाहरुको निरीक्षण
ह्यारी केन र लुका मोड्रिच आमनेसामने हुँदै : कसले मार्ला बाजी ?
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक भाल्भर्डे बर्खास्त, कुके नियुक्त
सहिद स्मारक ए डिभिजन लिग, मछिन्द्रकाे सान्दार जित !
कोरोना भाइरस : स्पेनिस फुटबल प्रशिक्षकको मृत्यु
लुकाकुको आत्मघाती गोलले सेभिल्लालाई दिलायो कीर्तिमानी छैटौँ पटक युरोपा लिग
बार्सिलोनाको सानदार जित : मेस्सीको गोल म्याराडोनालाई समर्पण